Ogaden News Agency (ONA) – Golaha Dhexe ee Kooxda TPLF oo Shir Yeeshay Shalay.
Golaha Dhexe ee Kooxda TPLF oo Shir Yeeshay Shalay.
Posted by ONA Admin	/ August 28, 2018
Golaha Dhexe ee xisbiga qawmiyada Tigrey ayaa shalay oo ay taariikhdu ahayd 27/8/2018 shir ay yeesheen ku dhawaaqay in ay qabanayaan shir waynihi ay horey u balan qaadeen iyagoo raaciyay in ay ka guulaysan doonaan farogelinta iyo ku tumashada dastuurka waxa ay ugu yeedheen dalka Itoobiya kasocota.
Sida ay xogtu nagu soo gaadhayso kooxda TPLF ayaa waxay sheegen in wacyiga shacabku qabo fashilin doono qorshe kasta oo lala damco gobolka Tigrey waa sida hadalka loo dhigaye. TPLF oo 27 sano kasoo talinaysan Itoobiya ayaan ku qanacsanayn sida uu wax u wado ra’iisul-wasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Axmed.
Waxa xusid mudan in ay OPDO xasaasiyad ka qabto shirkan ay TPLF shalay iclaamisay oo horey loo sheegey qabashadiisa. OPDO ayaa ka cabsi qabtaa in niman larabo maxkamad in lasoo taago oo u dhashay qawmiyada Tigreyloo magacaabo xilal xasaanad leh si aanan loo maxkamadeynin sidoo kale waxaa laga cabsi qaba in ay talada xisbiga qabtaan ragg siyaasad ahaan Oromada guud ahaan gaar ahaan OPDO aad u neceb.
Dhanka kale xukuumada Abiy waxay rabtaa marka ay kala dirto xisbiga TPLF ee talada u haya qawmiyada Tigrey sidii ay u galeen oo kale xisbigii Soomalida kadib in shirka ay qabsadaan TPLF tu.
Isku soo wada duubo Itoobiya xaalkeedu waa dheri karaya oon la saadaalin karin meesha ay ku dambayn doonto.
Xigasho: Midnimo Web TV